7 nke osimiri kachasị mma na ndịda Italy | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Getaways Europe, General, Italia, Osimiri
Mgbe ezigbo ihu igwe rutere, anyị adịlarị ka osimiri, ebe ọ bụ na a matalarị ndị nọ n'ógbè anyị, anyị chọrọ nrọ nke ụsọ mmiri ndị ọzọ nke ebe ndị mara mma. Dị ka 7 kacha mma osimiri na ndịda Italy. N'Itali, a gaghị enwe ụkọ nke osimiri mara mma na nke mbụ, yana Oké Osimiri Mediterenian n'azụ na ihu igwe dị mma.
Rịba ama osimiri ndị a, ọ bụ ezie na anyị ji n’aka na anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Ha bụ nanị ole na ole mara sandbanks, ma ụsọ oké osimiri alitali agwaetiti ndị ahụ jupụtakwara n’ụsọ osimiri nke kwesịrị ịlafu. Maka ugbu a, anyị ga-ahụ ogo nke osimiri asaa anyị ga-achọ ileta taa iji nwee ihu igwe na Mediterranean.
1 Scala dei Turchi na Agrigento, Sicily
3 Marina dell'Isola na Tropea, Calabria
4 Spiaggia dei Conigli na Lampedusa, Sicily
5 Cala Rossa na agwaetiti Favignana, Sicily
6 Baia delle Zagare na Gargano, Puglia
7 Cala Spinosa na Santa Teresa Gallura, Sardinia
Scala dei Turchi na Agrigento, Sicily
Anyị na-amalite site na otu n'ime ndị kachasị ewu ewu niile, nke a maara maka ugwu ndị ahụ na-acha ọcha nke ebili mmiri na ifufe, nke mepụtara ụdị dị iche, dị ka a ga - asị na ha bụ steepụ. Aha gị, 'Steepụ nke ndị Turkey' Ọ na-abịa site na ọnụ ọnụ ugwu ndị a nakwa na ebe a bụ ebe mgbaba maka ndị omempụ Turkey ọtụtụ narị afọ gara aga. Ọ dị n'ụsọ oké osimiri Realmonte, n'ógbè Agrigento. O nwere ezigbo aja na mmiri doro anya maka ebe a na-asa ahụ, na nzu nzu nke ọnụ ugwu ndị ahụ na-eme ka ha nwee agba ọcha mara mma nke dị iche na oke osimiri. Ugbu a, ndị ohi anọkwaghị ebe mgbaba na ya, mana ọ bara uru itinye oge iji zoo n'akụkụ osimiri a, dina n'okwute ma ọ bụ na ájá.
Mgbe anyị na-ekwu maka Capri anyị na-echeta na agwaetiti a bụ ebe mgbaba nke Pablo Neruda, kamakwa nke ndị ukwu Hollywood kpakpando si 50s, emi okokụtde mfọnmma paradise ke ekpri isuo emi. Ya mere, anyị enweghị ike ịhapụ uche n'ụsọ osimiri dị na agwaetiti a mara mma, ebe mgbaba mgbochi paparazzi maka ndị ama ama site na oge ọzọ. Taa ọ ka bụ ebe dị ùgwù, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka ọtụtụ iri afọ gara aga, mana ọ ka na-enyekwa otu amara ahụ. Marina Piccola dị na mpaghara Campania. Obere mmiri nke ejiri okwute mee ka ekpuchita ya na elu ugwu. E nwere ọtụtụ ụzọ iji ruo ebe ahụ, mana ihe kachasị ewu ewu na nke mbụ bụ site na Krupp, ụzọ gbagoro agbago.
Marina dell'Isola na Tropea, Calabria
La Marina dell'Isola pụtara maka oke okwute ya na ịbụ akụkụ osimiri mepere emepe mana nrọ. N'ógbè Vibo Valentia, na Tropea, Calabria, bụ nnukwu osimiri a, nke dị n'etiti 'Isola Bella' na 'Playa de la Rotonda'. Ọ na-anọchi anya nnukwu nkume nke na-abanye n'oké osimiri ma kewaa ụsọ osimiri, ebe ụlọ ụka Santa María de la Isla, ebe nsọ ochie nke Benedictine, dị. N'otu oge anyị nwere ọmarịcha osimiri, anyị nwere ike ịnụ ụtọ obodo Tropea, bụ ndị ụlọ ha leghaara ugwu ahụ, na ebe anyị nwere ike ịhụ katidral ya nke Romanesque.
Spiaggia dei Conigli na Lampedusa, Sicily
Nke a bụ 'Osimiri nke Rabbits' ọ bụrụ na anyị atụgharịa aha ya, na Lampedusa. O sitere n’agwaetiti dị ya n’ihu, Isola dei Conigli, ma ewere ya dịka otu n’ime oke osimiri kachasị mma n’ụwa. Na n'ezie ọ ga-abụ n'ihi na ọ bụ a na-amaghị nwoke ebe mara mma nke ukwuu, na kristal doro anya mmiri. Ekwesịrị ikwu na iji rute ebe ahụ, ị ​​ga-eje ije obere oge n'okporo ụzọ na n'oge ọkọchị, ọ na-abụkarị mmadụ jupụtara. Ná ngwụsị nke oge okpomọkụ, anyị nwere ike ịhụ oke mbe na mpaghara ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere isi ọma.
Cala Rossa na agwaetiti Favignana, Sicily
Cala Rossa a bụ nke ihe ndozi nke Aegades Islands, na agwaetiti Favignana. Ebe a na-ebupụta ebe a na-awapụta okwute, ma bụrụkwa ebe ndị njem nleta na-eme. Ugbu a, ọ pụtara maka mmiri ya dị oke egwu, yana ụda turquoise na acha anụnụ anụnụ na nnukwu ebe maka ịsa ahụ ma ọ bụ nsị. Okirikiri ala dị gburugburu ebe ị nwere ike ịgagharị na usoro okwute mezue ọmarịcha osimiri a mara mma ma mara mma.
Baia delle Zagare na Gargano, Puglia
Emi odude ke Ogige Ntụrụndụ Gargano ị ga-ahụ mmiri a. N'ime mmiri a ọtụtụ ihe pụtara, ọ bụkwa na ọ bụ ebe mara mma mara mma nke nwere ọdịdị anụ ọhịa, nke, agbanyeghị, na-adịkarị njem nleta karịa n'oge gara aga, ma nwee nche anwụ n'ụsọ osimiri na ụfọdụ ọrụ. Ọ na-apụta maka isi okooko osisi oroma yana kwa maka okwute ndị dị n'etiti oke osimiri ahụ, nke mmiri na ikuku na-eguzobe, ihe na-echetara anyị oke osimiri dịka Las Catedrales dị na Lugo, Spain
Cala Spinosa na Santa Teresa Gallura, Sardinia
Ke obio Capo Testa kwuru ị ga-ahụ Cala Spinosa, a osimiri na-ruru site n'ụzọ ndị na-a bit nkpoda. Ihe dị mma banyere obere anyaukwu a bụ na ọ bụghị mmadụ niile dị njikere itinye mgbalị iji rute ya, mana ọ bara uru n'ezie ịnụ ụtọ mmiri ndị ahụ doro anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » 7 nke kacha mma osimiri na ndịda Italy
10 ọnụ ala Europe maka ezumike